टोटेनहमको जितमा बेलको २ गोल
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत टोटेनहमले बर्नलेलाई पराजित गरेको छ । गएराति सम्पन्न खेलमा टोटेनहमले बर्नलेलाई ४-० गोलले पराजित गरेको हो । विस्तृतमा
काठमाडौँमा हुने नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको खेलको मिति सर्‍यो
म्यान्चेस्टर सिटीको वुल्भ्सविरुद्ध सानदार जित
स्थायी रुपमा नै ग्यारेथ बेललाई अनुबन्ध गर्ने तयारीमा टोटनहम
एभर्टनले साउथह्याम्प्टनलाई हरायो
रियल सोसिडाडसँग बराबरीमा रोकियो रियल मड्रिड
आरसिटीले टुसाललाई हरायो
भिल्लारियलविरुद्ध एट्लेटिको मड्रिड विजयी
लिभरपुलद्वारा शेफिल्ड युनाइटेड पराजित
दुई च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र पीएसजी पराजित
काठमाडौं । शनिबार राति सम्पन्न इन्टनेशनल च्याम्पियन्स कपमा प्रिमियर लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटी र लिग वान् विजेता पीएसजी पराजित भएको छ ।
रुपन्देहीमा कभर्ड हल बन्दै, ८० प्रतिशत काम पूरा
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको पर्सावलमा रु ५० लाखभन्दा बढीको लागतमा कभर्ड हल निर्माण हुन लागेको छ ।
अभ्यास खेलमा कप्तान पारसको शानदार प्रदर्शन, नेपाल भारी रनले विजयी
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमले ह्याम्पशायर हग्स क्लबसँगको पहिलो अभ्यास खेल २ सय ४३ रनले जितेको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा ३ सय ६३ रनको लक्ष पछ्याएको ह्याम्पसायरलाई ३७ ओभरमा १ सय १९ रनमा अलआउट गर्दै नेपालले फराकिलो जित हात पारेको हो ।
यी हुन् चर्चित फुटबल खेलाडीका प्रेमिका तथा श्रीमतीहरु
फुटबल खेलाडीहरुका प्रेमिकाको विषयलाई लिएर पनि विश्वभर खुब ठुलो चर्चा हुनेगर्छ ।
टेनिस खेलेरै करोडौ सम्पत्ति जोडेका खेलाडीहरु
टेनिस खेल विश्वमै सर्वाधिक हेरिने खेल तथा राम्रो पैसा भएको खेलको रुपमा लिने गरिन्छ । विश्वभर टेनिसका लाखौ दर्शकहरु रहेका छन् ।
नेयमार पनि रियल मड्रिड नजाने
काठमाडौँ । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका खेलाडी नेयमार जुनियरले आफूले क्लब नछोड्ने बताएका छन् । विश्वकपबाट ब्राजिल बाहिरिएपछि हाल बिदा मनाइरहेका नेयमारले आफू रियल मड्रिडमा आबद्ध हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका हुन् ।
मलाई सर्जियो रामोससँग तुलना गरेको मन पर्दैनः भराने
एजेन्सी । विश्वकप विजेता फ्रान्सको टिमका डिफेन्डर राफेल भारानेले आफूलाई सर्जियो रामोससँग तुलना गर्दा दिक्क लाग्ने बताएका छन् । रियल मड्रिका २५ वर्षीय डिफेन्डर भारनेले फ्रान्सको पत्रिका ली’इक्यिुपसँग कुरा गर्दै मान्छेहरुले आफूलालाई रामोससँग तुलना गर्दा नराम्रो अुनभव हुने बताएका हुन् ।
लिजेन्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई रियल मड्रिडले किन औपचारिक बिदाई गरेन ?
एजेन्सी । जुलाई १० मा इटालियन क्लब युभेन्टसमा आबद्ध भएका रोनाल्डोलाई रियल मड्रिडले हालसम्म पनि कुनै विदाइको कार्यक्रम राखेको छैन । नत कुनै आधिकारीक व्याक्तिहरुले उनलाई धन्यवाद नै दिएका छन् ।
जिदान फ्रान्सको प्रशिक्षक नबन्ने
काठमाडौँ । रियल मड्रिडबाट प्रशिक्षक पदको राजिनामा दिएका जिनेदान जिदानले फ्रान्सले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी नसमहाल्ने भएका छन् ।
भारतीय क्रिकेट टिमको कप्तानी धोनी कि विराट ?
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली नभएर महेन्द्रसिंह धोनी नै हुन् । अचम्म पर्नुभयो ? यो हामीले भनेको होइन यो त भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले भनेको छ ।